'उचाई'को छायांकनले फिल्म क्षेत्रमा बढायो आशा- मनोरञ्जन - कान्तिपुर समाचार
'उचाई'को छायांकनले फिल्म क्षेत्रमा बढायो आशा
छायांकन अनुमति खर्च घटाइदिए बलिउड फिल्महरू नेपाल आउने थिए : सुरज आचार्य
कार्तिक २१, २०७८ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, बोमन इरानी र डेनी डेन्जोङ्पा मिल्ने साथी हुन्छन् । डेनी सोलुखुम्बुवासी हुन् । आफ्ना मिल्ने साथीलाई उनी आफ्नो गाउँ-ठाउँ घुमाउने कुरा सधैँ गरिरहेका हुन्छन् । अमिताभ, अनुपम र बोमन एक दिन अचानक नेपाल आइपुग्छन् । नेपाली गाइड परिणिती चोपडाले उनीहरूलाई डेनीको घरसम्म पुर्‍याउने जिम्मा पाउँछिन् । डेनीको घरसम्म पुग्ने यात्रामा यी तीन साथीहरू आउने आरोह अवरोह नै 'उचाई'को मूल कथा हो ।
यही कथा खिच्न बलिउड निर्देशक सुरज बडजात्यको टिमले नेपालमा करिब १ महिना बिताए । बलिउड स्टार अनुपम खेर, बोमन इरानी र परिणिती चोपडाले नेपाली भूमिमा पहिलोपटक अभिनय गरे । निर्देशक सुरज ३० तारिखमा नेपाल आएका थिए । फिल्मका मुख्य कलाकारहरू अक्टोबर ३ मा आइपुगेका हुन् । अक्टोबर १ मै फिल्मको करिब डेढसय जनाको टिम आइपुगेको थियो । सुरजको निर्देशकीय टिमले पहिला काठमाडौंको छायांकन सम्पन्न गर्‍यो । स्वयम्भु, विमानस्थल, हायातको दृश्य खिचिसकेपछि टिम अक्टोबर ६ मा लुक्ला उड्यो । चार दिन लुक्लामै छायांकन भयो । अक्टोबर ११ मा उनीहरू नाम्चे पुगे । नाम्चेबाट टोली १८ मा काठमाडौं फर्कियो । २ दिनको आरामपछि अक्टोबर २२ मा मनाङ पुगे । त्यहाँ २९ सम्म छायांकन गरेर ३० मा फिल्मका मुख्य कलाकारहरू भारत फर्किएका छन् ।
कोरोना महामारीले नेपाली फिल्म क्षेत्रलाई धरासयी बनाएको बेला फिल्म क्षेत्रका सयौं प्राविधिक तथा कामदारहरूले रोजगारी पाए । १ सय ५० जना पोर्टर, २४ जना गाइड र सहायक गाइडले एक महिनामा कम्तीमा ८० हजारदेखि १ लाखसम्म पारिश्रमिक पाए । यससँगै फिल्म 'उचाई' ले यहाँको फिल्म र पर्यटन व्यवसायलाई केही तंग्रिन उर्जा मिलेको अपेक्षा गरिएको छ । यो फिल्मले नेपाल छायांकनमा भारतीय रुपैयाँ १० देखि १२ करोड खर्च भएको 'उचाई'का नेपाल व्यवस्थापन हेरेका सुरज आचार्य (थ्री ह्विलर्स संचालक) बताउँछन् ।
प्रोडक्सन कन्ट्रोलर/म्यानेजर, सुरज आचार्य फिल्मका लाइन प्रड्युसरसमेत हुन् । मुम्बई बसेर काम गरिरहेका दीपक पन्त फिल्मका अर्का लाइन प्रड्युसर हुन् । कोभिडअघि नै दीपकसँग 'उचाई'बारे कुरा भएको थियो । निर्माण टिमसँग पहिलो लहरको कोभिडपछि छलफल भयो । त्यसपछि सुरज बडजात्यालाई आचार्यले पोखरा, लुक्ला, नाम्चेका छायांकन स्थल देखाए । त्यतिखेर मुस्ताङ खुलिसकेको थिएन । मुस्ताङको विकल्पमा उनले नै मनाङमा फिल्म खिच्न सुझाए । मनाङको रेकी सिद्ध्याएपछि सुरजको टिम अक्टोबरमा नेपाल छायांकनका आएको हो ।
छायांकन स्थलमा हरसमय बलिउडका १ सय ४२ जना टिम हुन्थे । छायांकनका दौरान द्वन्द्व निर्देशक श्याम कुसाल र कोरियोग्राफर सबिना खान नेपाल आएर फर्के । भारतीय टिममा बढीमा १ सय ५५ जना सदस्य थिए । नेपालीतर्फ कलाकारबाहेक छायांकनमा ३० देखि ३५ जना नेपाली प्राविधिक खटिरहे । टिमका लागि ६०/६५ गाडीको प्रयोग २४सै घण्टा रहन्थ्यो । निर्माण टिमले यति एयरलाइन्सलाई लजिस्टिक पार्टनर बनाएको थियो । टिमले पहाडी भेगको उडानका लागि अल्टिच्यूड एयर बुक गरेको थियो ।
सुरजका अनुसार छायांकनको दौरान लगभग ३ सयको हाराहारीमा हेलिकप्टर उडान गरिएको थियो । 'यो एक महिनाको दौरानमा हेलीको फ्लाइट ३ सयभन्दा बढी थियो । हामीले फाप्लो-लुक्ला, लुक्ला-नाम्चे, नाम्चे-एबिसी, कालापत्थर, कालापत्थर-काठमाडौं । काठमाडौं-मनाङको यात्रा हेलीबाटै गरेका थियौं,' उनले सुनाए ।
'हम आपके हे कौन', 'मैने प्यार किया', 'मे प्रेमकी दिवानी हुँ', प्रेम रतन धनपायो', 'हम साथ साथ है', 'विवाह'लगायत फिल्म निर्माण गरिसकेको राजश्री प्रोडक्सन बलिउडको चल्तीकै ब्यानरमा पर्छ । निर्माण टिमले नेपालमा पहिलो चरणको छायांकन सक्यो । यसपछि 'उचाईं'को मुम्बई र दिल्लीमा छायांकन हुनेछ । आचार्यका अनुसार फिल्मको कथा नेपालकै भएकाले पर्दामा ४० मिनेटसम्म नेपालका दृश्यहरू देखाइनेछन् । अमिताभ बच्चन भने नेपाल आउन नपाएकाले भारतमै नेपालको सेट निर्माण गरेर छायांकन गरिने बताइएको छ ।
'उचाई'को छायांकनले पर्यटन, फिल्म क्षेत्रलाई राहत मात्र पुर्‍याएन । नेपालका फिल्म छायांकन स्थलहरूको प्रचारसमेत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अभिनेता अनुपम खेरले छायांकन दौरान आफू पुगेको जिल्लादेखि हरेक ठाउँको नाम राख्दै ४० लाख फलोअर्स भएको इन्स्टाग्राममा तस्बिरसमेत राखे । अभिनेत्री परिणिती र बोमनले पनि इन्स्टाग्राममार्फत् नेपालको प्रचार गरिरहे ।
'फिल्म पर्यटनमा सरकारको साथ पाएनौं'
बलिउड जस्तो ठूलो बजारमा जाने फिल्मले पर्यटन, फिल्म क्षेत्रलाई राहत पुर्‍याउँदा पनि सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नभएको आचार्यको गुनासो छ । 'यो फिल्मले कोरोनाबाट बल्लतल्ल माथि उक्लँदै गरेको अवस्थाको नेपाली प्राविधिक, पर्यटन क्षेत्र, होटल व्यवसायीलाई केही हदसम्म राहत दिएको छ । कलाकारहरूले छायांकनस्थलको प्रचार गरिदिएका छन् । भोलि यूरोप, अमेरिका छायांकन गर्न जाने बलिउड फिल्म नेपालतिर आकर्षित हुने भए,' आचार्यले भने, 'तर हामीले छायांकन दौरान नेपाल सरकारको तर्फबाट केही पनि सहयोग पाएनौं । विकास बोर्डले कोभिडको समयमा बलिउड टिमलाई भैरहवाबाट प्रवेश गर्न सहजिकरणको व्यवस्था मिलाइदियो । सार्क देशहरूका लागि मुस्ताङको छायांकन सस्तो छ । तर उपल्लो मुस्ताङको छायांकनको खर्च अन्य विदेशी फिल्मलाई लिइने मूल्य नै छ । त्यो मूल्य सार्क देशहरूका लागि घटाइदिएको भए छायांकन गर्नेहरू बढ्ने थिए । हाम्रो ठाउँको प्रचार हुन्थ्यो । आन्तरिक पर्यटक बढ्थे ।'
फिल्म पर्यटनले नै नेपालमा आन्तरिक पर्यटक बढेको दाबी गर्छन् आचार्य । 'नेपाली फिल्महरूकै कारण नेपालमा आन्तरिक पर्यटन बढेका छन् । आजभन्दा १० वर्षअगाडि मुस्ताङमा नेपालीहरू कमै पुग्थे । तर जब त्यहाँ फिल्म, गीतहरू खिचियो तब आन्तरिक पर्यटनको चहलपहल बढ्यो । आज विदेशीभन्दा त्यहाँ आन्तरिक पर्यटनको संख्या धेरै देखिन्छ,'उनले भने ।
लामो समयदेखि नेपालमा प्रोडक्सन म्यानेजरको जिम्मा सम्हालिरहेका आचार्य सरकारले छायांकन स्थलहरूको प्रचार गरिदिनुपर्ने धारणा राख्छन् । 'बलिउड र हलिउडका फिल्म अरबौं रकममा बनेका हुन्छन् । उनीहरू ५/१० दिनको फिल्म छायांकन गर्न नेपाल आइदिए मात्र पनि पुग्छ । नेपालमा छायांकनका लागि सूचना तथा संचार मन्त्रालयमा अनुमति बापत राजस्व १५ हजार बुझाउनुपर्छ,' उनी भन्छन्, 'हाम्रो देश त आफैँमा फिल्म स्टूडियो हो । जता क्यामेरा फर्काए पनि दृश्यहरू भेटिन्छ । हामीले कृत्रिम सेट बनाइरहनु पर्दैन । तर विदेशी फिल्म यता छायांकनका लागि आउने वातावरण बनाइदिन सरकारले प्रचार गरिदिनुपर्‍यो ।'
स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रको प्रचारमा चासो नदेखाइदिँदा नेपालका कति छायांकनस्थलहरू विदेशी फिल्मकर्मीलाई देखाउन नसकेको उनको भनाइ छ । 'विदेशी फिल्म नेपालमा आउँदा होटल व्यवसायीले कमाउँछ । प्राविधिकले काम पाउँछन् । विदेशतिर त मेरो देशमा फिल्म सुटिङ गर्न आइज भनेर कति सहुलियत दिइएको हुन्छ । नेपाल सरकारले छायांकनका लागि आएर स्थानीय कम्पनीमार्फत् बुझाएको कर मिनाहा गरिदिए पनि ठूलो राहत हुन्थ्यो । विभिन्न सेवा/सुविधाका लागि हामीले कर तिरेका छौं । त्यति मात्र मिनाहा गरिदिए पनि पुग्छ ।'
नेपालका कति क्षेत्रमा सजिलै छायांकन अनुमति नपाउने गरेको पनि आचार्यको गुनासो छ । 'नेपाली फिल्मको छायांकन केही ठाउँमा सजिलै प्राप्त हुनुपर्‍यो । जस्तै सिंहदरबार सुटिङ गर्न खोज्यौं भने एकदमै मुस्किल छ अनुमति पाउन । देशको सुरक्षा प्रतिष्ठाको प्रोटोकलअनुसार स्क्रिप्ट हेरेर हामीलाई त्यो अनुमति दिँदा हुन्छ त,' उनी तर्क गर्छन्, 'हामीलाई सिंहदरबारको सेट बनाउने खर्च हुँदैन । माइतिघर चोकबाट संसद् भवनसम्म पनि निषेधित क्षेत्र तोकिदिएको छ । त्यहाँ हामी छायांकन पनि गर्न पाउँदैनौं ।'
'मागअनुसार प्राविधिकले काम पाएन'
चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामा पनि 'उचाई'को प्रडक्सन म्यानेजरको रुपमा खटिएका थिए । फिल्मका लागि १२ जना प्रोडक्सन म्यानेजर सक्रिय थिए । महामारीबीच छायांकनका लागि नेपाल आएको यो फिल्मले ३० प्रतिशत नेपाली प्राविधिकलाई रोजगारी दियो । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्ट नेपाल छायांकनमा आउँदा ६० प्रतिशत प्राविधिकले काम पाउनुपर्छ भन्ने माग छ संघको ।
'उचाई'मा त्यो माग पूरा हुन नसकेको लामाको भनाइ छ । 'हो उचाईमा नेपाली प्राविधिकले काम पाए । तर लक्षित संख्याले काम पाएन । कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रोजेक्ट नेपालमा आउँदा ६० प्रतिशत प्राविधिकले त्यसमा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । कोभिडको समयमा ३० प्रतिशत प्राविधिकले काम पाएकोमा चित्त त बुझाएका छौं तर अब आउने प्रोजेक्टमा ६० प्रतिशत नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो,'उनले भने ।
'उचाई'ले मनाङको व्यवसाय उकासिदिएको होटल व्यवसायी विनोद गुरुङ बताउँछन् । 'फिल्मको टिम यहाँ मनाङको ९ वटा होटलमा बसेका थिए । यहाँका स्थानीयले फिल्ममा अभिनय गर्न पाए । यहाँका होटल व्यवसायी तथा स्थानीयले काम पाए । पोर्टर र गाइडले काम पाए । बलिउड टिमले मनाङमा १० दिन बिताए,'नेपाली फिल्मका निर्मातासमेत रहेका गुरुङ सुनाउँछन्,' उनीहरुले गंगपूर्ण तालको वरिपरि, खाङसार जाने बाटोको पुल वरपर फिल्म खिचे । मनाङमा लगभग १ करोड खर्च गरेर गयो टिमले।'
प्रकाशित : कार्तिक २१, २०७८ २०:५४
२९ वर्षदेखि चर्चित गीत- 'तिहारै आयो, लौ झिलिमिली'
कार्तिक १७, २०७८ रीना मोक्तान
काठमाडौँ — 'तिहारै आयो लौ, झिलीमिली, ए सुन हजुर भैलिनी आए आँगन… ।' भैलो खेल्ने समूहले आफ्नो घरको आँगनमा यही गीत बजाउँदै नाचगान गर्दा निर्देशक शम्भु प्रधानको मन ढक्क फुल्छ । तिहार नजिकिएसँगै सुपर मार्केटदेखि घर/घरमा यो गीत बज्न सुरु हुन्छ । यो गीत नगुञ्जिएसम्म तिहार आएको भान नै हुँदैन ।
भैलो खेल्नेले त कण्ठस्तै पारेका हुन्छन् । आफ्नो फिल्मको यसै गीतमाथि भैलो खेलेको देख्दा शम्भुलाई लाग्छ, 'समाजलाई केही त दिएछु ।'
'स्वर्ग' फिल्मको पटकथाले नै मागेको गीत थियो यो । राम लाहुरे(शिव श्रेष्ठ)लाई खोज्दै सावित्री(गौरी मल्ल) गाउँ/गाउँमा भैलो खेल्न हिँडेकी हुन्छिन् । भैलो खेल्ने क्रममा लाहुरेको घरमा पुग्दा यो गीतको दृश्य सुरु हुन्छ ।
निर्देशक प्रधानले गीतकार यादव खरेललाई फिल्मको उक्त दृश्यका लागि गीत लेख्न लगाए । शम्भुजित बाँस्कोटालाई संगीतको जिम्मा लगाइदिए । यादव र शम्भुजितसँग भेटेर गीतको कथा र परिवेश सुनाए । गीतकार खरेलले तिहारकै झल्को दिने शब्दहरु रचे । शम्भुजितले संगीत भरेपछि तयार भयो, 'भैलिनी आए आँगन… ।'
विगत २९ वर्षदेखि हिट यो गीत तिहारको 'एन्थम' नै बनिसक्यो ।
'भैलो खेल्नेहरु मेरै घरमा आउँछन् मेरै गीतमा भैलो खेल्छन् । पल्लो पट्टी घरमा भैलो खेल्ने टिमले त्यही गीतमा नाचेको देख्छु । अर्कै आनन्द महसुस गर्छु । नेपाली दर्शकले यसरी हाम्रो गीत मनपराई दिँदा त खुशी लाग्छ नि,' प्रधान सुनाउँछन्, 'अहिले हामी फिल्म बनाउँदैनौं । तर तिहारमा यही गीतमा भैलो खेलेको देख्दा, नाचेको देख्दा यो क्षेत्रलाई केही त दिएछु भन्ने अनुभव हुन्छ । मैले त यो गीत हाम्रो फिल्मको भन्ने नै बिर्सन्छु । यो गीत त अब राष्ट्रकै भइसक्यो ।'
गीतमा लोचन भट्टराई र नुतन प्रधानको स्वर छ । फिल्मको यो गीतबाहेक अन्य सबै गीतलाई मुम्बईमा रेकर्ड गरिएको हो । त्यतिबेला फिल्मका गीत मुम्बईमै रेकर्ड गरिन्थ्यो । तर आफूहरुले ‍मौलिक स्वादकै लागि पनि यो गीतलाई नेपालमै रेकिर्डिङ गरिएको प्रधान सुनाउँछन् ।
मुम्बईमा रेकर्डिङ गराउँदा मादलको इफेक्ट बलिउड शैलीको सुनिएला भन्ने सोचेर उनीहरुले गीतलाई नेपालमै रेकर्ड गराए । 'मुम्बईमा त बलिउड टच आउँथ्यो । हामीलाई गीतमा मौलिक बाजाको धुन चाहिन्थ्यो । मादल र सारंगीको मौलिक धुनकै लागि गीतलाई यता रेकर्डिङ गर्‍यौं, ' प्रधान नोस्टाल्जिक भए, 'नेपालमा रेकर्ड गरेको गीत पनि चल्दो रहेछ त ! हामीले लोकल पाराले गीत रेकर्ड गरेका थियौं ।'
भिडियो खिच्‍न १४ रात
यो गीतको छायांकन गर्न १४ रात लागेको थियो । चांगुनारायणको एउटा घरमा गीतको भिडियो खिचिएको हो । त्यतिबेला सबै कलाकारको व्यक्तिगत सवारी साधन थिएन । उनीहरु एउटै बसमा छायांकनस्थल पुग्थे ।
काठमाडौंबाट कलाकार, प्राविधिकको टोली छायांकनस्थल पुग्दा ८ बजिसक्थ्यो । छायांकन सुरु हुँदा १०/११ बजिसक्थ्यो । जाडोको समय । राति अबेरसम्म सुटिङ गर्दा खाना त्यतै खाने व्यवस्था मिलाइन्थ्यो । रातको १/२ बजेसम्म छायांकन हुँदा सबै हाइ काढ्थे । प्याकिङ गरेर घर फर्कनुको विकल्प हुन्थेन । लगातार १४ रातसम्म काठमाडौंदेखि छायांकनका लागि चांगुनारायण पुगेर यो फिल्मको सुटिङ गरियो ।
दुई दशकदेखि तिहारको सदाबहार गीतका रुपमा चर्चित छ,'तिहारै आयो लौ झिलीमिली ।' गीतले दर्शकको मन छोएकै कारण हरेक तिहारमा यो गीत बज्ने गरेको प्रधानको भनाइ छ । 'सायद यो गीतले नेपालीहरुको मुटु छोइदियो । हामी नेपाली तिहार भन्ने बित्तिकै रमाउँछौं नि । दसैंभन्दा पनि धेरै उत्साह हामी तिहारमा हुन्छौं, 'प्रधानले भने, ' तिहारमा बत्तिको झिलिमिली हुन्छ । सेलरोटी पाक्छ । तिहारमा त छुट्टै मज्जा हुन्छ । दिदीभाईको सम्बन्धमा रमाउँछौं । 'तिहारै आयो लौ झिलीमिली' भन्ने पहिलो पंक्तिले नै दर्शकको मन प्रफुल्लित हुन्छ । सायद यही कारणले गीत हिट भइदिएको हो कि !'
गीत, संगीत र आवाजको तालमेलसँगै कथा र परिवेश मिल्दो भिडियोले यो गीत दर्शकले मनपराइदिएको दाबी गर्छन् गीतकार खरेल ।
'आम दर्शकको मनलाई यो गीतले छोयो । त्यसैले लामो अवधिसम्म चल्यो यो गीत । गीत हिट हुनुमा धेरै कारण हुन्छन् । लेखकले लेखिदिएकै भरमा अथवा गायक/गायिकाले गाइदिएको भरमा गीत चल्दैन, 'खरेल सुनाउँछन्, 'गीत/संगीतमा तीन आयम हुन्छन् । गीत, संगीत र आवाज । यही त्रिवेणी मिल्यो भने गीत हिट भएर आउँछ । तर यो त्रिवेणी मात्र होइन गीतको दृश्य भिडियोमा उतारिएको हुन्छ । कथा र परिवेशसँग गीतको सामांजस्य मिलेको छ । सम्भु प्रधानले गीतलाई ठिक कथा र परिवेशमा प्रस्तुत गरेका छन् ।'
खरेलको घरमा एकपटक ७१ जनाको टोली भैलो खेल्न आइपुगेका थिए । उनीहरुले यही गीत गाउँदै भैलो खेले । हरेक तिहारमा भैलो खेल्न आउने टोलीले उनको आँगनमा यो गीत गाएकै हुन्छन् । 'म कहाँ आएर यही गीतमा नाच्ने युवाहरुलाई यो गीत मैले लेखेको भन्ने पनि थाहा हुँदैन,' उनले भने, 'गीतहरु भनेको २/४ वर्ष चल्छ । त्यसपछि हराउँछ अनि अर्को नयाँ आउँछ । तर यो गीत यतिका लामो वर्षसम्म चल्यो । अहिलेसम्म गीत चलिरहनु भनेको यो गीत स्रोताहरुको मनमा बस्न सकेको प्रमाण हो ।'
कहिलेकाहीँ रचनाकारले स्वेच्छाले लेखेका गीत फिल्ममा समावेश गरिन्छ । कतिपय समयमा निर्देशकले दिएको कथा र परिवेशको आधारमा गीत लेखिन्छ । गीतकार खरेलले फिल्मका गीत लेख्नुअघि निर्माताको मात्र कुरा सुन्दैनन् । निर्देशकसँग फिल्मको कथा सुनेर मात्र लेख्न बस्छन् । निर्देशक प्रधानबाट कथा र परिवेश सुनिसकेपछि उनले यो गीत लेखेका हुन् ।
कति फिल्मकर्मी हतारमा गीत लेखिदिन भन्दै उनीकहाँ आउँथे । तर उनले त्यस्तो गीत लेख्नमा रुची देखाएनन् । 'कतिपय फिल्ममा मैले लेखिदिएको गीतकै बेइज्जत हुने किसिमको भिडियो बनाइएको छ । पात्र र परिवेशको सामान्जस्य नमिल्दा गीतको स्तर नै घटेको छ । तर यो गीतमा निर्देशक शम्भु प्रधानले न्याय गरेका छन् । हुन त आजसम्म मैले स्वर्ग फिल्म भने हेरेको छैन,' खरेल सुनाउँछन्, 'गीतको भिडियोमा तिहारको माहोल देखाइएको छ । बत्तिको झिलिमिली अनि भैलोको दृश्य छन् । तिहारको साँस्कृतिक पक्ष देखाइएकाले पनि गीतले दर्शकको मन जितेको हो ।'
कथाकै माग थियो गीतको स्याड भर्सन पनि । 'टाढाका हामी धाएर आयौं हाम्रो त घर हो गैरी गाउँ । मनका धनी रहेनछन् यहाँ हिँड है साथि फर्कि जाउँ…।' लाहुरे नदेखेपछि दुखित हुँदै सावित्रीले यी अन्तरा गुनगुनाउँछिन् ।
संगीतकार शम्भुजित बाँस्कोटा गीतमा प्रयोग गरिएको 'मेरो हजुर नजाउ लाहुर, नेपालमै पाइन्छ जागिर' भन्ने शब्द आफूले पछि थप्न लगाएको बताउँछन् । 'तिहारको समयमा विदेशिएका दाजुभाइहरुको सम्झना हुन्छ । हामीकहाँ कमाउन देश छोडेर बाहिर जाने चलन छ । फिल्मको मुख्य पात्र पनि बाहिर जान्छ । त्यसैले मलाई लाहुरको विषयय जोड्न मन लाग्यो । त्यति कुरा मिसाउँदा भावनात्मक निकटता गाँसिएला भन्ने थियो,' शम्भुजित सुनाउँछन् । शम्भुजितले भने झैं गीतका यी अन्तराले नेपाली दर्शकको मन हुँडलिदिन्छ ।
गीतमा भावना, संस्कृति र परम्परा मिसाउनु थियो । चल्दै आएको भैलोमा भन्दा फरक धुन सिर्जना गर्न चाहन्थे शम्भुजित । परम्परागत भैलोको चलन त देखाउनु नै थियो । त्यसमा केही नौलोपन पस्किन उनलाई चुनौती थियो । भैलोको नयाँ धुन निकाल्न आफूले निकै मिहेनत गरेको बताउँछन् बाँस्कोटा । 'परम्परागत देउसी भैलो चल्दै आएको थियो । म नौलो किसिमले प्रस्तुत हुन्छु भन्ने थियो । देउसी भैलोको साँस्कृतिक पक्षलाई पनि समेट्नुपर्ने थियो । तर पुरानो धुनमा अलिकति पनि नबसेर नयाँ धुनसँग अगाडि बढ्नुपर्ने चुनौती थियो,' उनी सुनाउँछन्, 'त्यसका लागि कम्पोजिसनमा मैले धेरै मिहेनत गर्नुपर्‍यो । लोक सँस्कृतिलाई ध्यानमा राखें । धुन नै नयाँ राखेर गीत रेकर्ड गरियो ।'
आफूले सिर्जना गरेको धुन २ दशकदेखि तिहारमा गुञ्जिँदा उनी आफूलाई आशिषित महसुस गर्छन् । 'म एकदमै आशिषित अनुभव गर्छु । जीवनमा धन नकमाए पनि जन कमाइन्छ भनिन्छ । तिहारको समयमा जन-जनको मनमा यो गीत गाउँदा एकदमै खुशी लाग्छ,' बाँस्कोटाले सुनाए ।
प्रकाशित : कार्तिक १७, २०७८ १८:५२